PSJTV | जुटमिलमा सरकारको ६८% सेयर ३३% मा झार्ने खेलाडी को हुन् ?
काठमाडौं: तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले ३१ असार ०७२ मा इटहरीनिवासी नीलहरि काफ्लेलाई विराटनगर जुटमिलको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरे । मिलको सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा सार्ने प्रपञ्चको सुरुवात त्यही दिन भएको हो । अध्यक्ष हुनासाथ काफ्लेले सुरुमा उद्योगको अभिलेख केलाए ।
उनले एक करोड १० लाख चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीमा प्रतिकित्ता १६० रुपैयाँका दरले ६८ हजार सात सय ५० कित्ता सेयर हुनुपर्नेमा ६६ हजार ६ सय ८९ कित्ता मात्र अभिलेखमा भेटिएको देखाए । र, दुई हजार ६१ कित्ता सेयर हराएको भन्दै बिक्री गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गराए । यसरी उद्योग स्थापना हुँदा वि.सं. १९९३ मा निर्धारण भएको मूल्यमै प्रतिकित्ता एक सय ६० रुपैयाँका दरले अध्यक्षसहित तीनजना सेयरधनीले सेयर किने ।
विराटनगर जुटमिल तत्काल सञ्चालन हुने अवस्थामा छैन । तैपनि सेयरका लागि किन जोरजुलुम भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । खासमा उद्योगको नाममा विराटनगर र झापामा रहेको जग्गाको मूल्य १६ अर्ब अनुमान छ । त्यही जग्गा हत्याउन सञ्चालकहरूले सेयरमा षड्यन्त्र गर्दै आएका हुन् ।
पुँजी वृद्धिका नाममा जुटमिलका सञ्चालकले आफूखुसी वितरण गरेको सेयरलाई कार्यान्वयन नगर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले १२ मंसिर ०७४ मा पत्र काटेपछि काप्mले र वनबीच ठूलो विवाद भएको हो । योजनाहरू असफल हुँदै गएपछि वन र काफ्लेबीच विवाद पनि बढेको छ । काफ्लेबाटै सेयर लिएर सञ्चालक हुँदै वन अध्यक्ष भएका हुन् । तर, उनीहरूबीच आपसी लेनदेनको विवाद छ । काफ्लेले आपूmबाट एक करोड रुपैयाँ सापटी लिएको र फिर्ता गर्न नमानेको वनको दाबी छ ।
वनलाई दुई सय कित्ता सेयर बेचेको अभिलेख नै काफ्लेले मेटिदिएका छन् । हकप्रद २५ हजार कित्तामध्ये वनले लिएको नौ हजार दुई सय ७५ कित्ता सेयर पनि अर्थ मन्त्रालयको असहमतिअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले खारेज गरिदिइसकेको छ । यसरी, वन सेयरधनी नै नभएको काफ्लेको दाबी छ । अध्यक्षका रूपमा वनको वैधतामाथि चुनौती दिँदै काफ्लेले उच्च अदालत विराटनगर र पाटनमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा हालेका थिए । यसबीचमा काफ्लेले अर्का सेयरधनी मुकुन्दप्रसाद नेपाललाई अध्यक्ष घोषणा पनि गरेका थिए । त्यसपछि उद्योग मन्त्रालयले प्रबन्ध सञ्चालक पदबाट काफ्लेलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्‍यो ।
मुकुन्द नेपाल आफूलाई अध्यक्ष दाबी गर्दै अदालत पनि गए । नेपालको पक्षमा तीनजना र वनको पक्षमा चारजना सदस्य भएकाले वनले मुद्दा जिते । उद्योग मन्त्रालयले पनि वनलाई नै वैधानिक अध्यक्षको मान्यता दिएको छ । वैधानिकता पाएपछि वनले १७ भदौ ०७५ देखि दिगो रूपले सञ्चालन गर्ने भन्दै जुटमिल आंशिक रूपमा चलाए । तर, काफ्लेको पालामा खरिद भएको पटुवामा आफूले खरिद गरेका केही पटुवा थपेर सुतली र बोरा उत्पादन गरे । तर, केही दिनमै मिल फेरि बन्द भयो । यसरी ७० जना मजदुर र ४३ जना कर्मचारी अलपत्र छन् । महरापुत्र भन्छन्, ‘साधारण सेयर लिन फारम बुझाएका हौँ, फिर्ता पनि गरिसक्यौँ’
‘जुटमिल डुबाएर ६९ बिघा जग्गा हत्याउने षड्यन्त्रमा सभामुखदेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसम्म’ शीर्षकको समाचारप्रति सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुलले आपत्ति जनाएका छन् । ‘दुई वर्षअगाडि विराटनगर जुटमिलको पब्लिक सेयर खुल्दा साधारणतर्फको आठ हजार रुपैयाँबराबरको मैले र सोही परिमाणको दाजु निर्मलले सेयर लिन फारम भरेर बुझाएका थियौँ,’ नयाँ पत्रिकालाई प्रस्टीकरण पठाउँदै उनले भनेका छन्, ‘तर, पछि जुटमिलको कुनै सेयर नलिने भनी दुवै भाइले प्रक्रियागत रूपमै उक्त सेयर फिर्ता गरिसकेको प्रस्ट पार्न चाहन्छु ।’
देशकै ठूलो र पुरानो राष्ट्रिय उद्योगको जग्गा हडप्न खोज्ने विषय गम्भीर भएकाले कसैले त्यस्तो बदमासी गरिरहेको छ भने त्यसको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत उनले सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेका छन् ।
तर, विराटनगर जुटमिलले अहिलेसम्म सर्वसाधारणका लागि सेयर आवेदन खोलेको छैन । महरापुत्रहरूले सुरुमा लिएको संस्थापक सेयर हो र त्यसैका आधारमा हकप्रद सेयरसमेत लिएका हुन् । तर, अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेपले सबैको जस्तै राहुल र निर्मलको पनि सेयर खारेज भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट